Football Khabar » मेस्सीले ‘फिफा बेस्ट प्लेयर’ र ‘बालोन डि‘ओर’ जित्ने चार आधार
मेस्सीले ‘फिफा बेस्ट प्लेयर’ र ‘बालोन डि‘ओर’ जित्ने चार आधार
विश्व फुटबलको सर्वोच्च संस्था फिफाले अघिल्लो दिन ‘फिफा वर्ष खेलाडी–२०१९’ का लागि मनोनयन सार्वजनिक गर्दा स्पेनिस बार्सिलोनाका लिओनल मेस्सीसहित १० खेलाडी परेका छन् । मनोनयनमा मेस्सीबाहेक इटालियन युभेन्टसका क्रिस्यिानो रोनाल्डो, इंग्लिस क्लब लिभरपुलका भर्जिल भान डाइकलगायत रहेका छन् ।
यसपटक सो अवार्डका लागि अर्जेन्टिनी मेस्सीलाई बलियो दाबेदार मानिएको छ । त्यसैगरी, बालोन डि‘ओरका लागि पनि मेस्सीलाई दाबेदार मानिएको छ । मेस्सीका प्रतिस्पर्धी भान डाइक र रोनाल्डो छन् । यसपटक मेस्सीले फिफा वर्ष खेलाडी र बालोन डि‘ओर जित्न सक्ने केही आधारबारे चर्चा गरौं :
१. बार्सिलोनालाई ला लिगा जिताउन योगदान
हाल ३२ वर्ष पुगेका मेस्सीले गत सिजन बार्सिलोनालाई घरेलु लिग ला लिगा जिताउन प्रमुख भूमिका खेले । उनले टिमलाई च्याम्पियन बनाउन ३६ गोल गर्नुका साथै १३ गोलका लागि असिस्टसमेत गरे । मेस्सी ला लिगाबाट युरोपका टप–५ लिगमा सर्वाधिक गोलकर्ता बन्दै छैटौंपटक युरोपियन गोल्डेन बुट जित्ने खेलाडी बने ।
ला लिगामा बार्सिलोनाले अन्य टोलीलाई दबाबमा राखेर उपाधि जित्दा मेस्सीको प्रदर्शन उच्च रह्यो । उनले सबैभन्दा बढी फ्रि किक गोल गरे भने अन्य केही उल्लेख्य रेकर्ड बनाएका थिए ।
२. लगातार उच्च प्रदर्शन
गत सिजन पनि मेस्सीले विगत सिजनझैं एक लयमा प्रदर्शन गरे । केही समय चोटबाट समेत गुज्रिएका उनले गोल मात्रै गरेनन्, उल्लेख्य संख्यामा असिस्ट पनि गरे । सबैखाले प्रतियोगितामा गत सिजन उनले टोलीका लागि कूल १९ असिस्ट गरे, जुन युरोपका कुनै पनि खेलाडीले गरेको भन्दा सर्वाधिक धेरै हो ।
युरोपमा टप लिगमा गत सिजन मेस्सीको स्तरको प्रदर्शन गर्ने कोही खेलाडी थिएनन् । बार्सिलोनाले च्याम्पियन्स लिग जित्न नसके पनि उनले टिमलाई सेमिफाइनलसम्म लैजानेक्रममा उच्च प्रदर्शन गरेका थिए । गत सिजन मेस्सीले सबैखाले प्रतियोगिताबाट कूल ५१ गोल गर्दै १९ गोलम असिस्ट गरेका थिए, जुन अन्य खेलाडीको भन्दा बढी हो । गत सिजन ५० भन्दा बढी गोल गर्ने मेस्सी एक मात्रै खेलाडी हुन् ।
३. च्याम्पियन्स लिगको सर्वाधिक गोलकर्ता
गत सिजन बार्सिलोनालाई च्याम्पियन्स लिगको उपाधि दाबेदार मानिएको थियो । तर, बार्सिलोना सेमिफाइनलबाटै आउट भयो । बार्सिलोनालाई सेमिफाइनलसम्म लैजान कप्तान मेस्सीले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे । उनले ह्याट्रिकसहित १० खेलबाट १२ गोल गरेका थिए ।
गत सिजनभरमा कूल १२ गोल गर्दा मेस्सी चार वर्षपछि सर्वाधिक गोलकर्ता बनेका थिए । उनले प्रतियोगितामा २ गोलका लागि अस्टिसमेत गरेका थिए । प्रतियोगितामा उनले केही चर्चित र शानदार गोल गरेका थिए ।
४. कोपा अमेरिकाको प्रदर्शन
गत महिना ब्राजिलमा सकिएको कोपा अमेरिका फुटबलमा मेस्सीले अर्जेन्टिनाका लागि मात्रै १ गोल गरे । तर, उनी अर्जेन्टिनी टोलीका लागि सबैभन्दा प्रमुख खेलाडी थिए । धेरै गोल र असिस्ट नभए पनि अन्य हिसाबले मेस्सी सबैभन्दा अगाडि देखिए ।
कोपामा मेस्सीको ड्रिबलिङ, पास पूरा गर्ने खेलाडी मेस्सी नै थिए । सिंगै प्रतियोगिताभरी बढी र सफल ड्रिबल गर्ने तथा सफल पास खेल्ने खेलाडी मेस्सी नै थिए । ब्राजिलसँग सेमिफाइनलमा अर्जेन्टिना २–० ले हारे पनि सो खेलमा मेस्सीको प्रदर्शन निकै राम्रो थियो ।
भलै, अर्जेन्टिना कोपामा तेस्रो टिम मात्रै बन्यो । तेस्रो स्थानका लागि भएको खेलमा अर्जेन्टिनाले चिलीलाई २–१ ले हराएको थियो । सो खेलमा मेस्सीले रातो कार्ड पनि पाएका थिए ।
प्रकाशित मिति १६ श्रावण २०७६, बिहीबार ११:४९